Akhriso sida loo kala horeeyo Tartanka Gool-dhalinta Champions League - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Akhriso sida loo kala horeeyo Tartanka Gool-dhalinta Champions League
Dhaliyaha da’da yar ee Erling Haaland ayaa hoggaaminaya tartanka gool-dhalinta Champions League ee xili ciyaareedkan, waxaana uu saxeexay siddeed g;ool oo laba ka mid ah uu ka dhaliyey Sevilla lugtii hore ee wareegga 16ka.
Kaalinta labaad ayay ku wada jiraan saddexda ciyaartoy ee Alvaro Morata, Neymar iyo Marcus Rashford, hase yeeshee laacibka United ayaa tartanka hadhay oo ay kooxdiisu u degtay Europa League, taas oo ka dhigan inuu ka baxay tartankan.
Alassane Plea oo Borussia Monchengladbach ku hoggaamiyey inay si durduro ah ugu soo gudubto wareegga 16ka, ayaa haysta shan gool, waxaanay isku mid yihiin Olivier Giroud, Ciro Immobile iyo Kylian Mbappe.
Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi oo ahaa xiddigaha inta ugu badan kusoo guuleysanayay gool dhalinta Champions League sannadihii ugu dambeeyey ayaa kaliya dhaliyey min afar gool, laakiin tartanka ayaan laga saari karin illaa maalinta ugu dambaysa ee uu soo dhamaanayo amaba ay kooxahoodu ka baxayaan.
Halkan kaga bogo xiddigaha ugu goolasha badan Champions League xili ciyaareedkan:
4 Mohamed Salah (Liverpool).
Xiddigihii kusoo guuleystay gool-dhalinta Champions League 28kii sannadood ee ugu dambeeyey & tirada goolasha ay dhaliyeen:
Previous articleQM oo markale ku baaqday in laga heshiiyo doorashada Soomaaliya.
Next articleXasan Sheekh & Sheekh Shariif oo abaabulka banaanbaxa ka wada Muqdisho